कलाकारहरू प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्नु कति ठीक ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः कार्तिक १८, २०७४ - साप्ताहिक
राजनीतिमा लागे पनि कलाकारलाई पार्टीले चुनावका बेला मात्र प्रयोग गरेका छन् । अरू बेला कुन पार्टीले कलाकारलाई महत्व दिएका छन् र ? कलाकार पार्टीमा लागेर कुनै अडान पनि लिएको देखिएको छैन । त्यसैले लाग्नु वा नलाग्नुको कुनै अर्थ छैन ।
- विजय सुवेदी आवाज, सञ्चारकर्मी
देश बनाउन कलाकारको प्रसिद्धिले भूमिका खेल्छ, त्यसैले ठीक हो ।
- सुजन सुवेदी, फेसन व्यवसायी
हुन त कलाकार र राजनेतामा खासै फरक देखिँदैन, दुवैले गर्ने नाटक नै हो । कलाकारले नाटक हो भनेर सिधैं स्वीकार गर्छन्, नेताहरू हाकाहाकी अस्वीकार गर्छन् । कलाकारले निर्देशकको इसारामा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्, नेताले छिमेकी राष्ट्रको । नेताले कलाकारजस्तो अभिनय गर्न सक्छन्, कलाकारले भने नेताको जस्तो नाटक गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कलाकार प्रत्यक्ष राजनीतिमा लाग्दा सुहाएको पाइएन ।
- निशा पन्थी, भिजे
जर्ज डब्लू बुस, प्रिन्स चाल्र्स, एडल्फ हिटलर, विस्टन चर्चिल, जेमी कार्टर, एडी रामा, जर्नल फ्र्यान्सिस्को फ्रेन्को, क्विन भिक्टोरिया आदि ललितकलाका राम्रा कलाकार हुन् । रोनाल्ड रेगन, आनोल्ड स्वाजनेगर हुँदै भारतका जयललिता, जयाप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा र नेपालका रेखा थापा आदि पर्दाका कलाकारको मात्र के कुरा गर्ने ? कलामा राजनीतिको र राजनीतिमा कलाको प्रयोग गर्ने क्रम पुरानै हो । कलाकारलाई राष्ट्रको गहना भनिन्छ । गहना भनेको अनिवार्य होइन, मन परे लगाउने नपरे सजाएर राख्ने वा प्रयोग गर्न छोडिदिने । राजनीतिकर्मीले गहना हुन मिल्दैन उनीहरू योद्धा हुन् । योद्धा हुने आँट नहुने र कलाकारको सम्मान मात्र खोज्नेले राजनीतिमा जानु हुँदैन, किनभने ऊ निष्पक्ष हुँदैन कुनै एउटा विचारको पक्षमा हुन्छ ।
- स्वागत नेपाल, अधिवक्ता
अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘ज्याक अफ अल, मास्टर अफ नन’ । हो, त्यही भनाइजस्तै हो कलाकार राजनीतिमा लाग्नु भनेको ।
- अनुराग कुँवर, अभिनेता
कलाकार भएर राजनीतिक खबरदारी गर्नु राम्रो हो, तर पार्टीकै झन्डा बोकेर हिँडनुचाहिँ उपयुक्त होइन ।
-जनकदीप पराजुली, निर्देशक
कलाकार कुनै दलको हुँदैन, ऊ सबै दर्शक तथा श्रोताको हुन्छ ।
- शिशिर राणा, निर्देशक/अभिनेता
क्षमता, चेतना तथा नेतृत्व गर्ने दक्षता भए ठीक, स्वार्थमा लागे बेठीक ।
- विश्वेष श्रेष्ठ, व्यवसायी
देशलाई सोचेर राजनीति गर्ने स्वच्छ भावनाले लागे ठीक हो, अन्यथा अहिलेका अरू नेताजस्तै हुन्छन् ।
- लव कार्की, टेलिभिजनकर्मी
राजनीतिमा लागेकाहरू पनि कलाकार जस्तै अभिनय गर्न सिपालु छन् । कलाकार नै राजनीतिमा लाग्दा झूटा आश्वासन दिएको अभिनय गर्न थप सजिलो हुन्छ । त्यसैले सोह्रै आना ठीक ।
- प्रभात सुवेदी, गीतकार
राजनीतमा लोभमा फसेका कलाकारहरू मात्र लाग्छन् । सही साधनामा जुटेकाहरू नेताको पछाडि लाग्दैनन् । आ–आफ्नो क्षेत्र र पेसाबाट देशको सेवा गरे भैहाल्यो नि । कलाकार सबैको हो र सबैको भएर सेवा एवं सहयोग गरिरहनुपर्छ ।
- मिलन मोक्तान, संगीतकार
यता वा उता जता गए पनि देखाउने त कलाकारिता नै हो ।
- शान बस्न्यात, चलचित्र लेखक
कलाबाट रिटायर्ड भएपछि वा सबैतिर फ्लप भएपछि राजनीति गरे हुन्छ, किनभने नेपालको राजनीतमा यस्तैको खाँचो छ ।
- प्रभात रिमाल, इभेन्ट व्यवस्थापक
पूरै बेठीक ।
राज्यका असंख्य नीति जस्तो— वन नीति, परराष्ट्र नीति, बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा नीति, कृषि नीति, भूमि नीति, प्रशासनिक नीति, सञ्चार नीति, वातावरण नीति, यातायात नीतिजस्ता थुप्रै नीतिमा राज गर्ने नीति नै राजनीति हो । कुनै सचेत कलाकार राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष हुन सक्दैन । त्यस्तो हुनु भनेको श्वास–प्रश्वास चलेको जीवित तर अचेत अथवा अर्धचेत मासुको थुप्रो मात्र हुनु हो ।
- नारद खतिवडा, हास्य अभिनेता
कलाकार चेतनशील नागरिक हुन्, त्यसैले उनीहरू राजनीतिमा लाग्दा केही हुँदैन, तर त्यसको असर कला क्षेत्रमा पर्नुहुँदैन ।
- प्रदीपकुमार उदय, निर्माता